Qadaadiicyada birta ah ee laba-geeslaha ah Zinc Alloy ayaa laga sameeyay Dual Plant Soft Enamel Coin Calaamadaha
Midabaynta: Dahab dahab ah + dahab
Tixraaca farshaxanimada: dahaadh labalaab + dhaldhalaal jilicsan
Cusbooneysiinta, tayada ugu sarreysa iyo kalsoonida ayaa ah qiimaha asaasiga ah ee shirkadeena. Mabaadiidan maanta maanta ah waxay ka badan yihiin waligood waxay aasaas u yihiin guusheena shirkad caalami ah oo dhexdhexaad ah oo firfircoon oo loogu talagalay Qiimaha Jumlada Shiinaha ee Loogu Talagalay 3D Logo Korontada Korantada Lacagta Laba-geesoodka ah, Waad ku mahadsantahay waqtigaaga qaaliga ah ee aad nagu soo booqatay oo aad u fadhiisatay wada shaqeyn fiican kula socda.
Qiimaha Jumlada China Challenge Coin iyo qiimaha 3D Coin, waxaan si daacad ah u rajeyneynnaa inaan dhisno hal xiriir ganacsi oo muddo dheer ah oo wanaagsan oo lala yeesho shirkaddaada sharafta leh ee ku fikiray fursaddan, oo ku saleysan sinnaan, wax wada qabsi iyo guuleysi ganacsi guuleysata hadda illaa mustaqbalka.
Bixinta degdegga ah Shiine Challenge Coins iyo Birta qiimaha farshaxanka, Haddii aad tahay sabab kasta ha noqotee hubin nooca alaabada aad dooranayso, ha ka waaban inaad nala soo xiriirto waxaanan ku faraxsanahay inaan kula taliyo oo aan ku caawinno. Sidan ayaan kuu siineynaa dhammaan aqoonta loo baahan yahay si aad u sameyso xulashada ugu fiican. Shirkadeena waxay si adag ula socotaa “Ku badbaada tayada wanaagsan, Ku horumari adigoo dhowraya amaah wanaagsan. ”Siyaasada howlgalka. Kusoo dhawow dhamaan macaamiisha duug ah iyo kuwa cusub si aad u soo booqato shirkadeena ugana hadasho ganacsiga. Waxaan raadineynay macaamiil aad iyo aad u badan si aan u abuurno mustaqbal sharaf leh.
Hore: Naqshaddo Xusuus-goos ah oo Xamuul Qafiif ah oo laba-geesood ah Naqshadeynta Birta ee Epoxy Cover
Xiga: Laba-Dhinac Embossment Antique Nickel Souvenir Coin